IKHETHEKILEYO: IKHITSHI LAM LIKAHANNAH HART LIKADRUNK UKHUMBULA NGOKUSESIKWENI ISICELO SAKHE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Ikhethekileyo: Ikhitshi lam eliDinwayo likaHannah Hart ngokukhumbula ngokukhumbula isicelo sakhe ku-Fiancée Ella Mielniczenko
Ikhethekileyo: Ikhitshi lam eliDinwayo likaHannah Hart ngokukhumbula ngokukhumbula isicelo sakhe ku-Fiancée Ella Mielniczenko
Inkwenkwezi ye-YouTube uHannah Hart kunye nesithandwa sakhe baya kwi-2018 Knot Gala kwiThala leNcwadi loLuntu laseNew York eManhattan ngoMvulo, Okthobha 8, 2018. (Ityala: Roey Yohai Photography / Lizapourunemerenbleus)
Ngu: Joyce Chen 10/10/2018 ngo-2: 30 PM
Xa inkwenkwezi ye-YouTube UHana Hart ye U-Ella Mielniczenko , yayingelo thando ngqo ekuboneni okokuqala, kwaye yayingelo thando ngokuchanekileyo kwisicatshulwa sokuqala, nokuba. Ngapha koko, xa i-vlogger eyaziwayo emva kweDrink Kitchen yam yenza inyathelo lokuqala eMielniczenko, loo myalezo wamkelwa ngeemvakalelo ezixubeneyo.
Amagama akhe ngqo, kuba umhlobo wethu u-Ashley usenazo zonke izicatshulwa, yayile: 'Unezitshixo ezisezantsi,' uHart, 31, ukhumbula ku Ingcaciso . Ukunyaniseka, nangona kunjalo, wayethumele uMielniczenko iBitmoji yakhe ngokwakhe esithi Ucinga ntoni '? njengendlela yokukhaba incoko yabo.
Ndandihlutha ngaphandle. Kwakungathi, 'Yintoni le?' UMielniczenko, oneminyaka engama-28, utsho ehleka. Kusuku olungaphambili, umhlobo wabo ebebhalele uHart, ebuza ukuba angacinga na ngokubuza uMielniczenko ngomhla. Ngomso olandelayo, uHart wagqiba ekubeni uya kuthi. Kwaye laqala njalo ibali lothando lwesibini-nangona babedibene okokuqala kwiinyanga ngaphambi koko, xa uHart wayekwividiyo eyayiveliswa nguMielniczenko.
Into endiyithanda kakhulu ngoHana kukuba ubukhali kakhulu, utshilo uMielniczenko. Yindibaniselwano ebukhali kodwa ekhawulezayo. Uyazazi izinto ezininzi, kodwa ucinga kakuhle ngeenyawo zakhe, kwaye yeyona nto ndiyithandayo ngaye. Kwaye, mhle kakhulu. Uhlekisa nje. Undenza ndigabhe amanzi ngalo lonke ixesha kuba ndiyahleka. Okanye uzokuxelela isiqhulo kwaye ndiza kumxelela ukuba awukwazi ukuthetha ngelixa ndisitya kuba ndiza kuqala ndikrwitshwe.
Hart, ophethe i-hit Uthotho lweYouTube Ikhitshi lam lokuNxila, ikwanguye owacebisa uMielniczenko emva kokuba esi sibini besithandana okwethutyana. Yayiyincoko eyaphela kuthethathethwano kuba, njengoko uHart ebeka, sobabini sinomdla wokuwina-ubuntu.
Baye bagqiba kwelokuba bazakujolisa ekuzibandakanyeni kwi-2018, emva koko incoko yajikela ekubeni ngubani oza kuphakamisa.
Ndandifana, 'Kulungile, kodwa kufuneka ibe ndim oyenzayo, kuba uthe' ndiyakuthanda 'kuqala, undiphuze kuqala, ufuna ukuba ligosa lokuqala umntu ongatshatanga naye, utshilo uHart. Kwaye kum, bendifana nokuthi, 'Kuya kufuneka undinike into ibe yeyokuqala, ke bendifuna ukumbuza.' ... Silawula sobabini, ke yayiyincoko efuna ukuba nayo.
Aba babini bazibandakanya eHawaii emva kohambo oluya eJapan (ngexa uHart aqinisekisa uMielniczenko ukuba akazukuphakamisa), kwaye ngoku bakwizigaba zokuqala zokucwangcisa umtshato wabo, awubiza ngokuba ngumsebenzi omkhulu uHart.
Ndingathi eyona ngxaki inkulu esithe sayenza ngokunyanisekileyo luluhlu lweendwendwe, utshilo. Ke sikwinyathelo lokuqala, uluhlu lweendwendwe. Yongeza uMielniczenko: Sinombono omninzi wento esiyifunayo.
Phakathi kwezinto zabo ezingenakuthethathethana? Ukutya okumnandi, umculo olungileyo, kunye nebha evulekileyo, ngethemba lokuzibamba ngokwabo endaweni ethile emaweni ajonge ulwandle, ihlathi laseRedwood emva kwabo. Nokuba iinkcukacha ezichanekileyo azisebenzi, nangona kunjalo, esi sibini asikhathazeki kakhulu.
Kuyinyani oku: wonke umntu esimaziyo usebenza nzima kwaye wonke umntu esimaziyo uzenzele, kwaye sifuna umtshato ube lithuba labantu abasiphakamisileyo ukuza kuthi ga kweli xesha ebomini bethu nakubantu ababekhona thina basebenza nzima njengoko sisenza ukuze sibenempelaveki emyoli, utshilo uHart. Siyatshata, sithanda izinto ezininzi. Masibe nexesha elimnandi.
sisiphi isandla osifaka kumsesane wesithembiso
unganxiba cream emtshatweni
uyicoca njani iringi yakho
UTom brady kunye nomtshato we-gisele bundchen
ingaba uyileta yam yomtshakazi